“Qorshaha xulka talyaaniga waa mid cabsi badan ku abuuraya xulalka kale” – Antonio Conte – Gool FM
“Qorshaha xulka talyaaniga waa mid cabsi badan ku abuuraya xulalka kale” – Antonio Conte
Liibaan Fantastic June 6, 2016
(Roma) 06 Juunyo 2016 Tababaraha xulka qaranka talyaaniga ee Antonio Conte ayaa sheegay in qorshaha xulkiisu uu ku ciyaari doono koobka qaramada yurub uu yahay mid cabsi badan ku abuuraya xulalka kale.
Shaxda ah (3-5-2) ayuu ku sheegay tababare Antonio Conte inay tahay shax ay aad uga cabsan doonaan xulalka kale ee ka qaybgalaya koobka Euro 2016.
“Waxaan ciyaari doonaa kulankii ugu danbeeyay ka hor bilaabashada Euro, waa inaan hubinaa in shaqadeenu ay sifiican ku dhamaatay” ayuu yiri Antonio Conte ka hor kulanka saaxiibtinimo ee Finland ay laciyaari doonaan caawa 9:45 PM ee xiliga geeska afrika.
“Waa inaan hubinaa diyaargarowgeena fiican ee ku aadan koobka euro, waa inaan hubinaa xaalada jir ahaaneed iyo tan taatiko ee ciyaartoyda”.
“(3-5-2)? Fikrad fiican ayaan ka haysanaa kubadda aan soo bandhigayno, xulalka kale waxay leeyihiin qorshahooda gaarka ah, qorsha ciyaareedkeenu waa mid cabsi galinaya xulalka kale”.
“Waxaan u baahanahay aragtida qaar ka mid ah ciyaartoyda ka soo laabtay dhaawaca”.
Tababaraha xulka qaranka Chile oo ka hadlay kulanka caawa ee Argentina